Ebube Motion Mgbanam High Bay - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ebube Motion Mgbanam High Bay)
100w Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri
100w Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri 1. 100w Motion sensor LED ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri bụ ọhụrụ mara imewe. Obere na...
150w Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri
150w Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri 1. 150w Motion sensor LED ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri bụ ọhụrụ mara imewe. Obere na...
200w Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri
200w Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri 1. 200w Motion sensor LED ejiri ha mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, Ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Motion sensor LED elu n'ọnụ mmiri bụ ọhụụ ọhụrụ mara mma. Obere...
Ebube Motion Mgbanam High Bay Ebube Motion Mpụ Elu Bay Venture Lighting High Bay Led Shop Lighting High Bay Amazon Amazon High Bay Rab Ufo High Bay Eru Ufo High Bay 200w Ebube Mgbachi Anya